အယ်အာ့ဆာဗလီဝတ်ကျောင်းတော် – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on August 27, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo	Posted in UncategorizedTagged ဇီယွန်ဝါဒီ, လမြတ်ရမ်ဇမ်, အယ်ဂျာဇီရာ, အယ်အာ့ဆာဗလီဝတ်ကျောင်းတော်, ကေ့ဘလာ, ကျော်ကျော်ဦး, ဂျေရူစလင်, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, holy month of Ramadan, islam, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, Myanmar Muslims, ramadan, Ramdan Mubarak, religion
လမြတ်ရမ်ဇမ်မှာ Ramdan Mubarak လို့ကျွန်တော့စာမျက်နှာကို
Post အသစ် မတင်ဖြစ်တာအတော်ကြာသွားလို့လာလည်သူများကို
ဒီလ နှစ်ဆယ့်တစ်ရက်နေ့မှာ မွတ်စလင် အားလုံးအတွက်တတိယအထွတ်
မြတ်ဆုံး နဲ့ပထမဆုံး ကေ့ဘလာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျေရူစလင် မှာရှိ တဲ့အယ်အာ့ဆာ
ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်ကြီး ကိုဇီယွန်ဝါဒီ ဂျူးတွေ မီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ကျိုးစားခဲ့
တာ အနှစ်လေးဆယ် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
အနှစ်လေးဆယ်ပြည့် တဲ့ အခုအချိန်ခါမှာအယ်အာ့ဆာဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော်ကြီး ကို ဇီယွန်ဂျူးတွေက ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်မဟုတ်ဘဲ အပြီးသတ်ဖျက်ဆီး ဖို့ဗျောင် ကျကျကျိုး စားနေပါတယ်။
ကို ဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့ ဂျေရူစလင်နဲ့ပါလက်စတိုင်းကညီနောင်တွေရဲ့
လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်လေးဆယ်က ဇီယွန်ဂျူးတွေ အယ်အာ့ဆာဗလီဝတ်
ကျောင်းတော်ကို မီးရှို့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဂိုလဒါမေယာလို့ခေါ်တဲ့
” ကျမဘဝမှာစိတ်အပူရဆုံးနေ့ကိုပြောပါဆိုရင် အယ်အာ့ဆာဗလီကိုမီး
ရှို့တဲ့နေ့ပါဘဲ။ အာရပ်နဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေအားလုံး စိတ်ဆိုးပြီး ဖြစ်တည်စ
ဂျူးနိုင်ငံလေးကို အပြတ်ရှင်းလိုက်မလားလို့ပါ။ ကျမဘဝမှာ အပျော်ဆုံးနေ့ဟာလဲ
ဒီနေ့(အယ်အာ့ဆာဗလီကိုမီးရှို့တဲ့နေ့) ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်မွတ်စလင်
အာရပ်နိုင်ငံကမှ သူတို့ခြေတွေမြေ ပေါ်ကမကြွခဲ့လို့ပါပဲ”
အာရပ်နဲ့မွတ်စလင်တွေ အားလုံးထိထိရောက်ရောက် မလုပ်ခဲ့လို့ဂျူးတွေကစနစ်တကျ
နဲ့အယ်အာ့ဆာဗလီကို အပြီးအပိုင် ဖျက်ဆီးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကိုနေ့စဉ် နဲ့အမျှ ဂျူးတွေကသိမ်းယူနေတာ အယ်ဂျာဇီရာသတင်းမှာ
အတွက်အုပ်မြစ်ကို ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်နဲ့ကပ်ပြီး ချခဲ့ ပါတယ်။
အယ်အာ့ဆာဗလီဝတ်ကျောင်းရဲ့ နိမ့်ရာအရပ်မှာကပ်ဆောတ်တဲ့ ဂျူးပြတိုက်ကို
နောင်တချိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမဲ့ အိုလ်မတ်ကိုတိုင် ဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။
ဒီပြတိုက်မှာ နောင်တချိန် အယ်အာ့ဆာဗလီဝတ်ကျောင်းနေရာမှာ ဆောက်မဲ့
ပြိုလဲစေဖို့ တူးတာ မီတာလေးရာရှိပါပြီ။
ပါလက် စတိုင်းကျောင်းသားတွေကပ်ထားတဲ့ အယ်အာ့
ပိုစတာလေး တွေ့လို့ ဒီ Post ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြ မလဲ?
2 thoughts on “အယ်အာ့ဆာဗလီဝတ်ကျောင်းတော်”
Ramadan Mubarak. So sad to read this post. We can make special du’a for this masjid. And sent this news to Obarma.
Obama le bar mha ma lote naing par boo sister.
Big Bang and Origin of Life from Holy Quran